उत्तर कोरियाको पक्षमा चीनले मुख खोल्यो, अमेरिका के गर्ला?
HOME » उत्तर कोरियाको पक्षमा चीनले मुख खोल्यो, अमेरिका के गर्ला?
बीबीसी। उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीचको तनावको असर चीनमा पनि देखिन थालेको छ। चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले अमेरिका विरुद्ध उत्तर कोरियाले आक्रमण गरे चीन तटस्थ बस्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर पत्रिकाले चेतावनी दिँदै लेखेको छ, ‘यदि अमेरिका उत्तर कोरियामा शासन परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले आक्रमण गर्छ भने चीन चुप लागेर बस्नु हुँदैन।’
ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले उत्तर कोरियमाथि आक्रमण गरे चीनले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। ग्लोबल टाइम्सका विषयमा सो ग्लोबल टाइम्स चीनको सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टीको विचारलाई सम्प्रेशण गर्ने पत्रिकाका रुपमा लिइन्छ। ‘आफ्नो हित प्रभावित हुने गरी चीन उत्तर कोरियामा यथास्थितिमा परिवर्तन स्वीकार गर्दैन,’ ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ। अर्कोतर्फ अमेरिका उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमको विरुद्ध कडा कदम नउठाएको भन्दै चीनको आलोचना गर्दै आएको छ।
यसैबीच अमेरिकी रक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिसले उत्तर कोरियाको परमाणु संकत राजनीतिक संवादमार्फत नै टुंग्याउने विषयमा आफूले कोसिस गरिरहेको बताएका छन्। ‘युद्ध भयो भने त्यो निकै विनासकारी सावित हुन्छ। तर आवश्यक परेको खण्डका सैन्य कारवाहीकालागि पनि अमेरिका तयार छ,’ उनले भने।
रक्षा मन्त्रीको सो भनाइ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा ठिक उल्टो छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले केही दिन अगाडि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उत्तर कोरियालाई भयभित पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए। उनले उत्तर कोरियाले अमेरिका विरुद्ध कुनै गलत कमद चाले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। अर्कोतर्फ उत्तर कोरियाले बिहीबार प्रशान्त महासागरमा अमेरिकी द्वीप गुआममा आक्रमण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।
ग्लोबल टाइम्सले अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको तनावका विषयमा लेखेको छ, ‘यतिबेला अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच जुन किसिमको माहौल छ, त्यस्तो बेला चीन दुवै देशलाई सम्झाउन सक्ने अवस्थामा छैन। तर चीनले के कुरा खुलस्त पार्नुपर्छ भने कुनै पनि कारवाहीबाट चीनको हितमा खतरा पुग्छ भने त्यसको कडा जवाफ दिनुपर्छ।’
ग्लोबल टाइम्सले अगाडि लेखेको छ, ‘चीन कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्ध र दुवै तर्फबाट परमाणु कार्यक्रमको विरोध गर्छ। चीन कुनै पनि तरिकाले सैन्य टकरावको पक्ष लिँदैन। जो उत्तर कोरियामा सत्ता परिवर्तन गरी चिनियाँ हित प्रभावित गर्न चाहन्छन्, उनीहरुलाई कडा जवाफ दिन चीन तयार छ। आशा छ, उत्तर कोरिया र अमेरिका दुवै देश सम्यम देखाउने छन्। कोरियाली प्रायद्वीपमा सबै पक्षको सामरिक हित जोडिएका कारण कसैले पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाउने कोसिस गर्नु हुँदैन।’